トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Jikelele yokutakula esigabeni se-eshintsha pachinko, sici-ukubona ngokusebenzisa indlela
※ futhi zokugcina
pachinko emakhazeni Sicela ubheke njengoba isimo sonke umkhakha ngoba inkampani inzuzo kumele kube inzuzo nsuku zonke. Uma ucabanga ngakho, kodwa ukuhumusha Ungahlola futhi ukuthi zonke izikhathi yokutakula usuku, phakathi kwawo, ngosuku wukuthi ilindele inzuzo enkulu kunokujwayelekile, kuyoba njalo ngeNkosi usuku iqoqo okukhulunywa ngayo wamakhaza pachinko. Osukwini iqoqo okunjalo, ukuze singathwesi kube ukulahlekelwa ezinkulu, ake sibheke indlela yokubona ukuthi intando ngabe usuku utholiwe.
futhi sasemakhazeni pachinko ukuze bathamele lesi wonke, ngicabanga ukuthi kukhona impela usuku kweqiniso. Pachinko emakhazeni kusukela osukwini iqoqo, kubonakala izitolo eziningi cishe isigamu lwenyanga yesibili. Lokhu ngeke ifane kuye isikhathi izitolo izenzakalo Xintai esikhundleni. I Indlela yokubona ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo isikhathi yokutakula esinjalo, usazovele nail ukulungiswa.
umngcele imigqa, ezifana uphazamisa, kodwa kuyingxenye ezinzima isikhathi nail ukulungiswa yokutakula, kukhona ingxenye ukuthi ngifuna ukuba aqhubeke ebuka omunye. Kuyinto, uma inkokhelo ngokushesha iqedwe, wukuthi noma cha. Ngo imigomo pachinko ukuthi wenkokhelo, ebizwa ngokuthi i-TY. I ukusika TY, ke wenza ukulungiswa nail ngaphandle kokuqala, futhi Chirase ibhola, kuyindlela ukunciphisa isilinganiso ukungena isiqalo kanye umhlaseli.
Futhi, uma Re Chirase ibhola, futhi saba sibi kakhulu ibhola ngemuva ngayibamba, mina ibhola ziyanyamalala masinyane. Esigabeni yokutakula wamakhaza pachinko, sekuwumkhuba isinyathelo okuningi okunjalo ukulungiswa nail. Ukuze ahlukanise phakathi nail, kodwa kunzima ngempela, Toka iphethini ijikeleziswa izikhathi eziningi, uma umbono wokuthi ibhola ngokushesha iqedwe, ungakwazi ngcono cishe Uma ujwayelene play pachinko. Njengoba uthi izici zenzeka nail ukulungiswa kwesikhathi yokuthola, sicela ukhumbule zonke izindlela. Endabeni
Hanemono, kumele ube ikakhulukazi asebenzelana iso amaphuzu anjalo. Ngaphezu kwalokho, endabeni efana umshini CR, ngakho kukhona kungenzeka ukuthi ukulungiswa endleleni Horukon, mayelana kwakungeke kube omuhle ukugcina ngisho ekhoneni ikhanda.
nangezimpelasonto kanye namaholidi, pachinko kini futhi kuvuna njengoba wazi Isitolo kuyoba eziningi. Lokhu kunjalo ikakhulukazi, ezifana esiteshini izitolo kanye izitolo luchuma, ngeke ngokuvamile bavame ukugcina ikhasimende ungaphakathi ngisho ngezinsuku zeviki. Ezinjalo njengoba izitolo suburban, esitolo ukuthi akulindelekile ukusebenzisa ngezinsuku zeviki, ukuhlanekezela ukucisha omunye ngemigqibelo kanti futhi ngamaSonto, zikhona noma futhi izitolo ukuthi afeze ibhizinisi, ezifana ukuthi kuqoqwe.
Futhi, ukuthi izokwenziwa usuku walulama kunoma iyiphi eshintsha pachinko, kukhona usuku umiselwe. Kuyinto, Xintai ekhoneni kusukela ngesikhathi Golden Isonto amaholide nokuphinde uwavule kuze olandelayo esasisanda kuyilungisa futhi, kodwa kuze kube ukuphela kwenyanga, kusukela ngomhla ka-25 wenyanga ngayinye kakhulu. Kuze ku-25 inyanga ngayinye amaholide ezilandelanayo, kusukela ngisho kubonakala irayisi nge high okwedlulele inzuzo yokuthengisa kulindeleke, izohlala kwatholakala ohlangothini pachinko emakhazeni.
Ngaphezu kwalokho, labo abanesifiso omagazini, njll futhi Xintai, ngakho udlala kobakho, anidingi ukucisha. Imishini bill kumelwe futhi kuqoqwe, kuyoba zibuyiswe ngenakugwemeka umdlalo ukuma. Xintai kungenzeka hit ngosuku lokuqala Xintai, kuba ukuthi kukhona okungenzeka ukuthi izinkinga engcono ushaye ngesikhathi lapho ezolile kancane. Futhi ukuqonda le
pachinko emakhazeni kusukela osukwini iqoqo, sicela uqaphele ukuthi utshalomali nokumosha. Nokho, noma ngabe usuku iqoqo, kuphela sesibonile, ngoba angazi kakhulu, bayophuma izidingo hit ngokuphelele. Ukuze phelisa ubuncane utshalomali, ezitolo isimo nezinzipho Kungakuhle, isibe kuyabonakala ngisho kancane. Ngakho udlala, et al., It has asikho isidingo ukucisha. Imishini bill kumelwe futhi kuqoqwe, kuyoba zibuyiswe ngenakugwemeka umdlalo ukuma. Xintai kungenzeka hit ngosuku lokuqala Xintai, kuba ukuthi kukhona okungenzeka ukuthi izinkinga engcono ushaye ngesikhathi lapho ezolile kancane. Futhi ukuqonda le
pachinko emakhazeni kusukela osukwini iqoqo, sicela uqaphele ukuthi utshalomali nokumosha. Nokho, noma ngabe usuku iqoqo, kuphela sesibonile, ngoba angazi kakhulu, bayophuma izidingo hit ngokuphelele. Ukuze phelisa ubuncane utshalomali, ezitolo isimo nezinzipho Kungakuhle, isibe kuyabonakala ngisho kancane.